2 Samoela 15 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (2Sam 15)
2 Samoela 15
[Ny niodinan'i Absaloma, sy ny nandosiran'i Davida] Ary nony afaka izany, Absaloma dia nanomana kalesy iray sy soavaly ary olona dimam-polo lahy ho mpihazakazaka eo alohany.
Ary hoy koa Absaloma: Enga anie ka izaho no voatendry ho mpitsara amin'ny tany, ary ho avy atỳ amiko ny olona rehetra izay manana ady sy teny hotsaraina, dia homeko rariny izy!
Ary nony afaka efa-polo taona, dia hoy Absaloma tamin'ny mpanjaka: Trarantitra ianao, aoka aho hankany Hebrona hanefa ny voadiko izay nivoadiako tamin'i Jehovah. [Na: (efa-taona)]
Ary ny mpanompony rehetra nandeha teny anilany, ka ny miaramila mpiambina andriana rehetra sy ny Gatita rehetra, dia enin-jato lahy izay nanaraka azy avy tany Gata, nandeha teo alohan'ny mpanjaka.[Heb. Keretita sy Peletita]
Indro, izaho hijanonjanona eny amin'ny fitàna any amin'ny efitra mandra-pahatongan'izay teny avy atỳ aminareo hambara amiko.[Na: tani-hay]
Indreo, any aminy ny zanany roa lahy, dia Ahimaza, zanak'i Zadoka, sy Jonatana, zanak'i Abiatara; ary izy no hampitondrainareo izay rehetra renareo ho atỳ amiko.Koa dia tonga tany an-tanàna Hosay, sakaizan'i Davida, tamin'ny nahatongavan'i Absaloma tany Jerosalema.
2 Samoela 15:1
2 Samoela 15:2
2 Samoela 15:3
2 Samoela 15:4
2 Samoela 15:5
2 Samoela 15:6
2 Samoela 15:7
2 Samoela 15:8
2 Samoela 15:9
2 Samoela 15:10
2 Samoela 15:11
2 Samoela 15:12
2 Samoela 15:13
2 Samoela 15:14
2 Samoela 15:15
2 Samoela 15:16
2 Samoela 15:17
2 Samoela 15:18
2 Samoela 15:19
2 Samoela 15:20
2 Samoela 15:21
2 Samoela 15:22
2 Samoela 15:23
2 Samoela 15:24
2 Samoela 15:25
2 Samoela 15:26
2 Samoela 15:27
2 Samoela 15:28
2 Samoela 15:29
2 Samoela 15:30
2 Samoela 15:31
2 Samoela 15:32
2 Samoela 15:33
2 Samoela 15:34
2 Samoela 15:35
2 Samoela 15:36
2 Samoela 15:37